उखु बाट चिनी बन्छ चिनी गुलियो, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो ! « Bagmati Online
उखु बाट चिनी बन्छ चिनी गुलियो, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो !
सरकार र ऊखु किसानबीच सम्झौता भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि रकम भुक्तानी नपाएपछि उखु किसानहरु आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । गत वर्षको पुस १८ गते सरकार र उखु किसानबीच ५ बुँदे सहमति भएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता रहेपछि किसानहरु फेरि आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका हुन् । किसानहरुले राजधानीको माइतीघरमा रिले थालेका छन् भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान लिएका छन् । किसानलाई विभिन्न चिनी उद्योगले झण्डै ९० करोड बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । गत पु्समा भएको सहमतिअनुसार एक महिनाभित्र सबै बक्यौता रकम दिने सम्झौता अनुसार केही रकम भुक्तानी भयो पनि । त्यतिबेला किसानहरुले करिब २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । तर पछि बक्यौता रकम भुक्तानी दिन पनि बन्द भएको थियो ।
जिल्लामा पटक पटक आन्दोलन गरेपनि सम्झौता अनुसार रकम प्राप्त गर्न नसकेपछि किसानहरुले कात्तिक २३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्टसँग भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।छठसम्म बक्यौता रकमको भुक्तानी नभए मंसिर २७ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने कुरा ज्ञापनपत्रमै उल्लेख थियो । जसअनुसार आन्दोलन शुरु भएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए ।
जबसम्म सम्पूर्ण रकम प्राप्त हुँदैन, तबसम्म आफूहरु काठमाडौंबाट नफर्किने उनले बताए । अहिले सर्लाहीका किसान मात्र आन्दोलनमा आएका छन् । यो महिनापछि देशभरिका किसान काठमाडौं आउने उनले बताए । काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन विस्तारै देशैभरि विस्तार हुने उनले बताए । आन्दोलनमा सहभागि कृषकहरुले उखुबाट चिनी बन्छ चिनी गुलियो, माफियाको गुलियोमा सरकार भुलियो लगायतका प्ले कार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन् ।